Contemporary Latin American Nhetembo (II) | Zvazvino Zvinyorwa
Contemporary Latin American Nhetembo (II)
Mufananidzo naAna Juan
Nezuro takatanga ichi chinyorwa chakapetwa kaviri, nechikamu chekutanga «Chazvino chiSpanish American nhetembo« mune yatakataura newe nezve vadetembi vakadai saGabriela Mistral, José Marti kana Pablo Neruda. Muchikamu chino tinokuunzira imwe 3 isinganyanyo kujeka pane apfuura. Ndezve Cesar Vallejo, Vicente Huidobro y Octavio Zuva.
Kana iwe uchida kuenderera uchinakidzwa nhetembo dzakanaka dzakaunzwa kubva kune rimwe divi redziva, gara uchiverenga chinyorwa ichi. Isu tinokuvimbisa kuti uchafadzwa.
3 Octavio Zuva
Este Peruvia yema avant-garde nhetembo akazvarwa muna 1982 uye akafa muna 1938 akabuda pabasa rake rakakosha kwazvo rekunyora. Basa rake "Vatema Heralds" Rakadhindwa muna1919, rinochengetedza maungira eChimanjemanje asi zhinji nhetembo dzake, idzo dzakanangana nekutambura nekushungurudzika, dzinotanga nekuburitsa mita isina kufanira uye yakanyorwa nezwi risina kurongeka kupfuura zvaraona kusvika parizvino.
Sezvaanonyora, tinoona kutapwa, kufa kwaamai vake, hondo inotyisa uye yakashata yevagari vemuSpanish nekusarongeka kwakawanda, zvinotora chikamu chakakura chebasa rake remangwana. Muchidimbu chipfupi chakatsaurirwa kwaari tinoda kukupa zvishoma "Vatema Heralds", umo marwadzo emunhu ndiwo musimboti wechinangwa chebasa:
Kune kurohwa muhupenyu, kwakasimba kwazvo… handizive!
Inovhuvhuta sekuvenga Mwari; sokunge pamberi pavo,
hangover wezvose akatambura
ichanyura mumweya ... ini handizive!
Ivo vashoma; asi ivo vari ... vanovhura migero ine rima
pachiso chinotyisa uye kumashure kwakasimba.
Zvichida vanenge vari vana vevatorwa Attila;
kana vatema vanozivisa kuti Rufu runotitumira.
Ndiwo akadzika mapopoma evaKristu vemweya
yekutenda kunonakidza kuti Fate anomhura.
Idzo dzakarova ropa ndidzo dzakatsemuka
yechimwe chingwa chinopfuta pamusuwo wehovhoni.
Zvino murume… Murombo… murombo! Tenderedza maziso ako kunge
kana kuombera kuchitisheedza nepafudzi;
anotendeuka maziso anopenga, uye zvese zvakararama
inodziva, sedziva remhosva, mukutarisa.
Este Chilean munyori, zvakare kubva kunguva yeantant-garde yeLatin American nhetembo, saCésar Vallejo, iye akarimawo zvinyorwa nemitambo yemitambo mukuwedzera kunhetembo.
Waive mumwe wevavambi ve "kusika zvinhu", mugari wenhaka yekudzvinyirira uye yakaburitswa muna 1914 ine chirevo 'Kwete serviam', iyo inoramba kuti hunyanzvi hunofanirwa kutevedzera zvakasikwa uye inochengetedza kuti inofanirwa kugadzira zvitsva zvitsva kuburikidza neshoko.
Huidobro anopfupikisa munhetembo iyi kuti isu tichaona pazasi pechiratidzo chake chegadziriro, tichiitora seye manifesto yedzidziso yake yekusika:
Rega ndima iite sekiyi
Izvo zvinovhura chiuru mikova.
Shizha rinodonha; chimwe chinhu chinopfuura;
Zvakawanda sei maziso anotaridzika akasikwa,
Uye mweya wemuteereri unoramba uchidedera.
Invent worlds nyowani uye chengeta izwi rako;
Kana chipikisheni chikasapa hupenyu, chinouraya.
Isu tiri mukutenderera kwemitsipa.
Asi ndosaka tisina simba shoma:
Sei uchiimba ruva, haiwa Vanyanduri!
Ita kuti itumbuke mudetembo;
Zvinhu zvese zvinorarama pasi peZuva.
Nyanduri ndiMwari mudiki.
Octavio Paz, mukuru mudzidzisi wekusununguka kweshoko zvine chekuita nechokwadi: "Kunze kwenyika yezviratidzo, inova nyika yemashoko, hakuna nyika." Munhetembo iyi ya "Saramander" rakaburitswa muna 1962, mudetembi Mexican inosimudza avo miganho pakati peicho chaicho uye chisiri chaicho:
Kana iro jena jena riri chairo
wemwenje uyu, chaiwo
ruoko runonyora, nderechokwadi
maziso anotarisa zvakanyorwa?
Kubva pane rimwe izwi kuenda kune rimwe
Ndinoziva kuti ndiri mupenyu
pakati pemabhureki maviri.
Uye kusvika parizvino ichi chinyorwa chakapetwa nhetembo dzanhasi dzeLatin America. Kana iwe uchizvifarira uye uchida kuti titarise kumashure nguva nenguva uye titore zvinyorwa nemazita evanyanduri nevamwe vanyori vakatipa zvakanyanya panguva iyoyo (uye ramba uchipa isu), iwe unongofanira kutitaurira mune yedu makomendi kana nemasocial network. Anofara China manheru!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Contemporary Latin American Nhetembo (II)
Melvin Escalona (@ melvinviejo1) akadaro
Nenzira imwecheteyo, ndinotarisira mberi kune anotevera mabhuku. Ndinovimba kumuka pakati pevandinodzidza navo kubva kuVertical City, muCiudad Palmita muSanta Teresa Parishi yeguta reCaracas Venezuela; kubva uko uko vamwe vanyori vezuva, vadetembi uye vanyori venhoroondo vane eco-tsika mweya ine pfungwa dzehupenyu dzinozobuda
Pindura kuna Melvin Escalona (@ melvinviejo1)
Mabhuku kuti ufare
Iwo Akawanda Meso aSir Edward Fairfax Rochester